I-China AC kuya ku-DC 0-110V 14.5A 1600W Ukuhlela ugesi we-DC Umkhiqizi Nomhlinzeki |Huyssen
I-AC kuya ku-DC 0-110V 14.5A 1600W Uhlelo lukagesi lwe-DC
Lolu chungechunge luwumthombo wamandla aphezulu we-DC enamandla amakhulu ahlelekayo anesivinini sokuphendula esisheshayo, ukunemba okuhle kokulawula, kanye nebanga elibanzi lokukhipha amandla.
Ilungele ama-DC motors anamandla amakhulu, ama-compressor e-DC, izimoto zikagesi, i-aerospace, amandla avuselelekayo, namaseva.Ukuhlolwa komkhiqizo nokuguga kokushiswa kweminye imikhakha.
• Usayizi omncane, isisindo esilula, esifanele ukusetshenziswa kwendawo yokusebenza nokufakwa kwe-rack;
• Ukusebenzisa i-PWM modulation, i-crystal module idla amandla aphansi futhi igcina ugesi;
• Ukunemba okuphezulu, ukugeleza okuncane nokusebenza okuzinzile;
• Ukusebenzisa izinga lokusampula eliphezulu elinamadijithi angu-4, ugesi wokucaca okuphezulu kanye nemitha yokubonisa yedijithali yamanje;
• Isekhethi yobuchwepheshe be-elekthronikhi eklanywe kahle, ukupholisa umoya okuphoqelekile kanye nokwelashwa kokukhipha ukushisa, ene-coefficient ephansi kakhulu yokushisa;
• Ukulawulwa kokushisa okuhlakaniphile, ukuchithwa kokushisa okuphoqelekile kuzo zonke izinhlangothi, isivinini sokuphendula ngokushesha;
• Shintsha ngokuzenzakalelayo phakathi kwe-voltage engashintshi kanye nezindlela zokusebenza zamanje ezingashintshi;
• Isilawuli se-chip esingenisiwe, ukuqiniswa kwe-voltage / amandla akhona, okukhiphayo okuphezulu okuzinzile;
• Isekhethi yokuvikela i-overvoltage, isekethe yokuvikela ukushisa ngokweqile, umsebenzi wokuvikela isekethe emfushane;
• Ukusetha kusengaphambili kanye nemisebenzi yokubuka yenani le-voltage engaguquki, inani lamanje elingaguquki kanye nevelu yokuvikela i-overvoltage.
Imodeli(I-XXX ingeye-voltage ephumayo)
I-Voltage yokufaka(Ongakukhetha) Isigaba esingu-1: AC110V±10%,50Hz/60Hz1 Isigaba: AC220V±10%,50Hz/60Hz
Amandla Okukhipha (W) 1600W
Okukhipha Voltage / Yamanje adjustable Ibanga elilungisekayo le-voltage ephumayo : 0~I-Voltage Max
Uma udinga i-0~Max yamanje, sicela usithinte ukuze uqinisekise
Umthethonqubo Womthwalo ≤0.5%+30mV
I-Ripple ≤0.5% + 10mVrms
Ukuzinza kokunikezwa kwamandla ≤0.3%+10mV
Amandla kagesi |Ukunemba Kwamanje Kwesibonisi Ukunemba kwethebula lamadijithi angu-4 : ±1%+1 igama (isilinganiso esingu-10% -100%)
Amandla kagesi |Inani lamanjebonisa Ifomethi Ifomethi yokubonisa: 0.000 ~ 9999V;0.00 ~ 99.99V;0.0 ~ 999.9A;
I-Output Voltage Overshoot Yakha ku-OVP Protection ngenani elingu-+ 5%
Operation Temperature|Umswakama Izinga Lokushisa Lokusebenza : (0~40)℃;Ukusebenza Ukuswakama : 10% ~ 85% RH
Izinga Lokushisa Lesitoreji |Umswakama Izinga Lokushisa Lesitoreji : (-20~70)℃;Umswakamo Wesitoreji :10% ~ 90% RH
I-Over-Temperature Protection (75–85) C.
Imodi Yokukhipha Ukushisa/ Imodi Yokupholisa Ukupholisa umoya ngempoqo
Ukusebenza kahle ≥86%
I-voltage yokuphuma kokuqalaisikhathi sokusetha ≤3S
Ukuvikela I-voltage ephansi, i-voltage ngaphezulu, ngaphezulu kwamanje, isifunda esifushane, ukushisa ngokweqile
Amandla e-Insulation Okokufaka okokufaka: AC1500V, 10mA, imizuzu engu-1;Okokufaka - igobolondo lomshini: AC1500V, 10mA, imizuzu engu-1;Okukhiphayo - igobolondo: AC1500V, 10mA, imizuzu engu-1
I-Dimension /Netweight 350*150*175mm;NW: 6.8kg
Kwenziwe ngokwezifiso (Okungeyona ejwayelekile)
Imisebenzi yokulawula yangaphandle 0-5Vdc/0-10Vdc isignali ye-analogukulawula i-voltage ephumayo & yamanje
0-5Vdc/0-10Vdc isignali ye-analogukufunda emuva kokuphuma kwe-voltage & yamanje
0-5Vdc/0-10Vdc isignali ye-analogukulawula okukhiphayo KUVULIWE/KUVALIWE
4-20mA isignali ye-analoglawula i-voltage ephumayo & yamanje
RS232/RS485Ukulawulwa kwechweba lokuxhumana ngekhompyutha
I-Voltage ephumayo/Yamanje 1 ~ 2000V,Inani le-Stabilizer.0% kuya ku-100% iyalungiseka1~2000A,Inani lamanje eliqhubekayo.0% kuya ku-100% iyalungiseka
Okwedlule: I-DC 0-110V 50A 5500W Izinsiza zamandla e-DC ezihlelekayo 5.5KW
Olandelayo: I-DC 0-120V 50A 6000W Okuhlelekayo kwe-DC Power Supplies 6KW
I-AC/DC 0-17V 20A 340W amandla okushintsha alungisekayo...
I-0-220V 2A 440W Eshintshayo Ukunikezwa kwamandla
I-AC110V-260V kuya ku-DC 0-24V 83.3A 2000W Isisetshenziswa Samandla...
Amandla ahlala njalo e-PSU Ehlelekayo engu-2000W ene-CAN,...
I-DC elungisekayo 0-220V 5A 1100W Ukushintsha Amandla S...
I-Ultra Thin DC 0-90V 11A 1000W Ukunikezwa Amandla Nge...
Ukunikezwa kwamandla okuguquguqukayo, Ukunikezwa kwamandla okuhlelekayo, I-Led Strip Light Power Supply, I-Led Strip Light Transformer, I-Dc Power Supply, Ukunikezwa kwamandla okwenziwe ngezifiso,